ဒီလိုပြောကြစို့ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on May 2, 2011 at 16:43 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
I couldn't help it !!!
Daryl I am upset. Somebody told my boss I haveapart-time job.
စိတ်တိုတယ်ကွာ။ တစ်ယောက်ယောက်က ငါ့မှာအချိန်ပိုင်းအလုပ်ရှိတဲ့အကြောင်း
Smith And he doesn't like that ?
Daryl No, he doesn't. He thinks that I am too tired to work.
ဟင့်အင်း။ မကြိုက်ဘူး။ အလုပ်လုပ်ဖို့ ပင်ပန်းနေလိမ့်မယ်လို့ သူကယူဆတယ်။
Smith I am sorry. I have to admit I told him.
စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ။ အမှန်ဝန်ခံရရင် ငါသူ့ကိုပြောလိုက်တာ။
Daryl You told him ? Why ?
Smith I couldn't help it. He asked me point-blank.
ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။ သူကငါ့ကို တဲ့ဒိုး မေးတာ။
upset ဆိုတာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာ။ အလိုမကျတာ။ ၀မ်းနည်းတာ။ စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တာ။ ရခိုင်မုန့်တီတို့ အသုပ်စုံတို့ကို ငြုပ်သီးစပ်စပ်နဲ့စားပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာI have an upset stomach. လို့ပြောဖို့အခွင့်ကြုံပါလိမ့်မယ်။ အားကစားပွဲတွေမှာဆိုရင်မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘဲ ကမောက်ကမရလာဒ်တွေဖြစ်လာတာကို End Result Suffer Early Upset လို့ခေါင်းစီးရေးထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
I have to admit it. ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။ တစ်ခုခုကိုယ်လုပ်ထားတာကိုဝန်ခံတာ။
I couldn't help it. ကိုယ့်စိတ်ကူး၊ အပြုအမူတစ်ခုခုကို မလုပ်ဘဲ မထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တဲ့အခါသုံးနိုင်ပါတယ်။ အင်မတန် လွမ်းစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါ မငိုမိအောင် ထိန်းပေမယ့်လည်း မျက်ရည်ဝဲလာတဲ့အခါ I couldn't help it. ပြောလို့ရပြီပေါ့။ I couldn't help but shed tear. ဆိုရင် မျက်ရည်မကျဘဲမနေနိုင်ဘူးပေါ့။
point-blank ဆိုတာကတော့ မေးခွန်း(သို့)စကားတစ်ခွန်းကို သွယ်ဝိုက်မနေဘဲ တိုက်ရိုက်၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြောတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။
ကဲဒါဆိုရင် အခုပဲကိုယ့်ဘေးကသူငယ်ချင်းကို အောက်ပါစာကြောင်းလေးတွေပြောရင်း
အမှန်ကိုဝန်ခံရရင် အခု မင်းအကြောင်းကို ငါတွေးနေတယ်။
အဖေ သူ့မျက်မှန်ရှာမရလို့ စိတ်တိုနေတယ်။
google မှာ အခု keyword လေးတွေ ရိုက်ထည့်ပြီး ဘယ်လိုစာကြောင်းလေးတွေမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် သုံးထားသလဲဆိုတာရှာကြည့်လိုက်ပါဦး။
Dialogue source ကို http://www.englishdaily626.com/conversation.php ကရပါတယ်။
Permalink Reply by upokun on May 2, 2011 at 22:53
Permalink Reply by gdemo on May 5, 2011 at 15:46
thanks bro.ur sharings are very useful for us
Permalink Reply by Aung Aung on August 29, 2012 at 21:57
How nice one ? I like
Permalink Reply by Hnin Ei Phyo on August 30, 2012 at 11:41
Permalink Reply by Aung Aung on August 30, 2012 at 14:50
I love this lesson
Permalink Reply by Tsukino Usagi on August 31, 2012 at 23:39
Thank you very much for your post. I like it ^_^
Permalink Reply by kyaw thu win on June 8, 2015 at 6:12
Permalink Reply by Thu Zar Win on September 22, 2015 at 19:33
​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ ရှင်​ မသိ တာ ​တွေ သိခွင့်​ ရတဲ အတွက်​
Permalink Reply by htaylim on February 26, 2016 at 12:43
Permalink Reply by myinthlaing on August 19, 2016 at 16:44
great ,I like that your post.
Permalink Reply by Moe Lone Nyo on October 17, 2016 at 10:55
Permalink Reply by Nilar on October 28, 2016 at 17:07
noted with thank, very useful for us.